"စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ၊ စစ်တန်းလျားဆီ ဘာကြောင့် မပြန်ချင်သလဲ ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
"စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ၊ စစ်တန်းလျားဆီ ဘာကြောင့် မပြန်ချင်သလဲ
Author: lubo601 | 2:34 PM | No မှတ်ချက် |
ဦးပိုင် (UMEHL)/, မစက (MEC ) တို့အကြောင်း မြန်မာပြည်သူတွေ လေ့လာနိုင်စေဖို့ ...
စစ်တပ် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကြွယ်ဝမှုဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်မဟုတ်သလို့၊ အမျိုးသားလုံး ကြွယ်ဝရမယ့် အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်တပ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ကြွယ်ဝမှုဟာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ ကျောရိုးတစ်ခုပါ။
၁။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထိုအချိန်က န၀တ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေးအဖွဲ့) အစိုးရ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် (The Union of Myanmar Economic Holdings Limited) ကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၇/၉၀ ဖြင့် ကြေညာခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့၊ အာဏာသိမ်
းပြီး နောက်ပိုင်း တပ်မတော်ကတည်ထောင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
၂။ "ဦးပိုင်" စနစ်ဆိုသည်မှာ မိမိအရင်းထက် အဆပေါင်းများစွာပိုသော လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများကို ဖြန့်ခွဲချုပ်ကိုင် သည့် လက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်သည် အထူးကုမ္ပဏီတခုအနေဖြင့် ၎င်းမှ အပြည့်အ၀ပိုင် ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီခွဲများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် အထူးအခွင့်အရေးကို ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများမှာမူ ဤအခွင့်ထူးကို မခံစားရချေ။
ဦးပိုင်လီမ်ိတက်သည် သေးသေးမွှားမွှားလုပ်ငန်းနှင့် အရှုံးအမြတ်မသေချာသော လုပ်ငန်းမျိုးတွင် မပါဝင်ကြချေ။ဦးပိုင် သည် ဖရစ်ဝါနာ၊ ဒေ၀ူးတို့နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ ယခု စစ်တပ်ဦးပိုင်လီမိတက်တွင် အစုရှယ် ယာဝင်များက ဒါရိုက်တာရွေးချယ်ခွင့်မည်သို့ရှိကြောင်း ရှင်းအောင် မကြေညာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
၃။ တရားဝင်ဖော်ပြထားသော ရည်ရွယ်ချက် (၄) ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
(က) တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတုိ့၏ မှီခိုသူ ဇနီးသားသမီးများ သက်သာချောင်ချိရေး။
(ခ) စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မှီခိုသူ ဇနီးသားသမီးများ သက်သာချောင်ချိရေး။
(ဂ) ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေးအား အထောက်အကူဖြစ်စေရေး။
(ဃ) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေး။
အမှန်တွင်မူ ဦးပိုင်လီမိတက်ကို န၀တ/နအဖ စစ်အုပ်စုက တည်ထောင်လိုက်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ထဲတွင် စစ်တပ် အရာရှိကြီးများကသာ ထိပ်ပိုင်းမှ ချယ်လှယ်အကျိုးခံစားရရေး၊ တပ်သားများ၏လခကိုဖြတ်ပြီး အရင်းပြုကာ သွေးစုတ် ရေး စသည်တို့ အလိုလိုပါဝင်ပြီးဖြစ်နေသည်။ အောက်ခြေတပ်မှူးတပ်သားများ၏ဘ၀ကို အသေခံပဲစားဘ၀မှ မြှင့်တင် မည့်ရည်ရွယ်ချက် လုံးဝမပါဝင်ချေ။
ချုပ်ပြောရလျှင် စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် မိသားစုများ၏ ရာသက်ပန်အကျိုးစီးပွားအတွက် တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောတခုလုံးအား အာဏာဖြင့် လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ခြင်းပင် ဖြစ် သည်။
၄။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်တွင် ဥေဿျှာင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဥက္ကဋ္ဌရုံး (ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့) ဖွဲ့စည်းပုံဟူ၍ ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရှိသည်။ ဥေဿျှာင်အဖွဲ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး (ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်း အောင်လှိုင် (ကြည်း/ရေ/လေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဉာဏ်ထွန်း (ဦးစီးချုပ်-ရေ)၊ ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်း (ဦးစီးချုပ်-လေ)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းထိုက် (တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်)၊ ဗိုလ်ချုပ်လှ ရွှေ (တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ်) တို့ ပါဝင်သည်။ ဥက္ကဌရုံး ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ယခင်က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး (ကက ထုတ်) ဖြစ်ပြီး ယခု ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦး (စစ်ရေးချုပ်)၊ ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းသန်း (ကက၀ယ်)၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူးရုံးများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ အရာရှိချုပ်များ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးများ ပါဝင်သည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက် လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းများအား ဥက္ကဋ္ဌရုံး (ဒါရိုက်တာ)အဖွဲ့ဝင် ပါ ၀င်သော ဗိုလ်မှူးကြီးများ၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာများ၊ ဒါရိုက်တာများအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်သည်။
၅။ အစကနဦး အရင်းအနှီးပမဏမှာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ခန့်က ကျပ်ကုဋေတထောင် (သန်း ၁၀၀၀၀) ရှိသည်။ ဗမာပြည် သမိုင်းတွင် စတင်တည်ထောင်စလုပ်ငန်းတခုအဖို့ အကြီးမားဆုံးအရင်းအနှီးအဖြစ် စံချိန်သစ်တင်လိုက်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇/၉၀၊ အပိုဒ် ၄၊၅၊၆ အရ အရင်းအနှီး၏ ၄၀% ကို ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးက ထည့်ဝင်ပြီး ကျန် ၆၀% ကို စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းများက ထည့်ဝင် သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ကကဝယ်) က ထည့်ဝင်သည့် ၄၀%၊ တနည်း ကျပ် ကုဋေ ၄၀၀ မှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများဖြစ်သည်။အချုပ်ဆိုရသော် စစ်တပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းက (တကယ်စင်စစ်အားဖြင့် စစ် တပ်ထိပ်သီးများက) ပိုင်ဆိုင်ခံစားကြမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးအတွက် ပြည်သူလူထု၏ငွေ ကျပ်ကုဋေ ၄၀၀ ကို အတိုး မရှိ ဆွဲသုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျန် ၆၀% ကို စစ်မှုထမ်းဆဲ နှင့် အငြိမ်းစားတပ်မတော်အရာရှိများ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအုပ်စုများ အပါအ၀င် တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် မိတ်ဆွေအဖွဲ့များက ပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၆။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဦးပိုင်၌ authorized capital (တရားဝင်သတ်မှတ်သည့်ငွေရင်း-ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပေးမည့် အစု ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုး)မှာ ကျပ်သန်းပေါင်း (၄၀,၀၀၀) နှင့် allotted capital (ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးအပ်ပြီးသောအရင်း) ကျပ်သန်းပေါင်း (၃၉,၀၀၀) ရှိသည်။ ဤအထဲတွင် (ကကန) က ကျပ်သန်း ၈၀၀ ကျော် နှင့် ကကဝယ်က ကျပ်သန်း ၃၃၀၊ လက်ရှိစစ်မှုထမ်း ၃ သောင်းခွဲက ကျပ်သန်း ၁၉၀၀ ကျော်၊ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ ၁၅၀၀ ခန့်က ကျပ်သန်း ၃ သောင်း ၃ ထောင်ကျော်၊ အငြိမ်းစားစစ်မှုထမ်း ၆၀၀၀ ကျော်က ကျပ်သန်း ၁၂၀၀၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့များက ကျပ်သန်း ၄၀၀ ကျော် ပါဝင်သည်။
ဦးပိုင်သို့ထည့်ဝင်ရမည့် ငွေကြေးအချိုးအစားအရ တပ်ကြီးဆိုရင် သိန်း (၁၀၀၀)၊ တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲ့အဆင့် တပ်လတ် ဆိုရင် သိန်း(၃၀၀) မှ (၅၀၀)၊ တပ်ငယ်ဆိုရင် သိန်း (၂၀၀) မဖြစ်မနေ ရည်မှန်းချက်ထား၍ သတ်မှတ်ကာလတခု အတွင်း စုဆောင်းထည့်ဝင်ရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ရှိခဲ့သည်။ ဤငွေများကို တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များက ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှာကြရသည်။
၇။ ၂၀၀၆-၀၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တနှစ်အတွင်း ဦးပိုင်လီမိတက်သည် အမြတ်ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅ သောင်းခန့် ရှာဖွေ နိုင်ခဲ့သည်။ ဦးပိုင်လီမိတက် ကုမ္ပဏီအားလုံးပေါင်းလိုက်လျှင် ဒီ့ထက်များသည်။ ၁၉၉၅-၉၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကမူ ၃၀% အမြတ်ငွေပြန်ရခဲ့သည်။
သို့သော် သိန်း ၁၀၀၀ အောက်ရှယ်ယာဝင်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့များအတွက် တနှစ်လျှင် (၁၂%) အမြတ်ငွေခွဲပေးသည်။ သိန်း ၁၀၀၀ နှင့်အထက် ရှယ်ယာဝင်ထားလျှင်မူ ၂.၅% သာ အမြတ်ခွဲပေးသည်။ ဤအမြတ်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူးက မိမိ၏တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သလိုသုံးစွဲနိုင်သည်။ ဥပမာ ယူနီဖောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ စစ်ဖိနပ် စသဖြင့်။ သို့သော် လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်ကတည်းက တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ ပေးရမည့်အမြတ်ငွေများအား မပေးတော့ဘဲ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက် ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
အချို့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှာ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုကြောင့် အချိန်မှီပေးသွင်းရန်ခက်ခဲနေရာမှ တပ်မတော်သားတို့၏ ဘဏ်စုငွေများကို လက်လှည့်ယူငင် ပေးသွင်းမှုများ လုပ်ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်သားတို့ကလည်း စီးပွားရေးအခက် အခဲကြောင့် ဘဏ်စုငွေများ ပြန်ထုတ်လိုသည့်အခါ မပေးနိုင်ဖြစ်ပြီး တပ်တွင်းအမိန့်ဖီဆန်မှုများ ပေါ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ-တပ်မ ၁၁။ ဘဏ်စုငွေများကို ဦးပိုင်အတွက် ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသုံးမှုအပြင် တပ်မှူးနှင့်တပ်ထောက်တို့က အလွဲသုံးစားမှု များကြောင့်လည်း တပ်တွင်းမကျေနပ်မှု ဖီဆန်မှုများ ပေါ်ခဲ့သည်။ ဦးပိုင်မှရသည့်အမြတ်ငွေများကို အလွဲသုံးစားမှုများ လည်း ရှိလာသည်။
$ ဦးပိုင်လုပ်ငန်းများ $
၈။ ဦးပိုင်၏လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်
- ဦးပိုင်က အပြည့်အ၀ပိုင်သည့်လုပ်ငန်း။ ၃၅ ခု
- ဦးပိုင်နှင့်ဖက်စပ်ပိုင်လုပ်ငန်း။ } ၇ ခု
- ဦးပိုင်၏လုပ်ငန်းခွဲများ။ ၉ ခု
- ဦးပိုင်နှင့်ချိတ်ဆက် (သို့မဟုတ်) ဦးပိုင်မှ ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ထားသည့် စီမံကိန်းများ ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လိမိတက်တွင် ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ပံ့ထားသော ကုမ္ပဏီလုပ် ငန်းများ နှင့် အကျိုးတူဖက်စပ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများမှာ ကျောက်မျက်ရတနာတူးဖော်ရေး၊ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ရေး၊ ခဲသတ္တုတူးဖော်ရေး၊ အထည်ချုပ် စက်ရုံ၊ သစ်နှင့်သစ်အခြေပြုလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန်တိုက်ကြီး များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ် ပစ္စည်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ခြံမြေအရောင်းအ၀ယ်၊ သံမဏိစက်ရုံ၊ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရေး၊ ဆီအုန်း စိုက်ပျိုးရေး၊ သကြားစက်၊ ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ကားစက်ရုံ၊ အလှကုန်နှင့် စာရေးကိရိယာဆိုင်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
မြန်မာ့ပတ္တမြားလုပ်ငန်း၊ World Precious Gem Co. Ltd.၊ နီလာရိုးမကုမ္ပဏီ၊ အာရှအဖိုးတန်ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မြန်မာစည်သူရတနာကုမ္ပဏီ၊ ဇော်ဇော်ကုမ္ပဏီ၊ ရှမ်းရိုးမ ကုမ္ပဏီ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း (မိုးကုတ်-မိုင်းရှူး-နန်းယား)၊ သပိတ်ကျင်း ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ မော်ချီး ခဲသတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်း။ မြန်မာ အင်ပီရီယယ်ဂျိတ် ကုမ္ပဏီ လိမိတက်၊ ရှယ်ယာမိသားစုကုမ္ပဏီ လီမိတက်၊ Gold Gade Gems Co.၊ နီလာရိုးမ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ဆားမှော်ကျောက်စိမ်းတူးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း။ Myanmar Jade International (ကျောက်စိမ်းရောင်း (ဟောင်ကောင်))၊ ပျဉ်းမပင်စက်မှုဇုံ။
Myanmar Segye International Ltd., Myanmar Daewoo International Ltd., Myanmar Unimix International Ltd, Hwa Fhu International Ltd.
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte. Ltd.
Red Ruby စီးကရက်စက်ရုံ၊ ဒူးယားစီးကရက်စက်ရုံ (ပခုက္ကူ)၊ မြ၀တီကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ? စီးကရက်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ ဘီယာဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်း၊ စားသုံးဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ မော်တော်ကား၊ သံမဏိ တို့တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပဲနှင့်ပဲမျိုးစုံ၊ အဝတ်အထည်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ၊ စီးကရက်နှင့် ဘီယာဗူးများ တင်ပို့ခြင်း လုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုလုပ်ငန်း မြဝတီဘဏ်
ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပါရမီပို့ဆောင်ရေး၊ ရှမ်းမလေး၊ ရွှေမန်းသူ၊ ပုသိမ်သူ၊ ဘတ်စ်ကားလိုင်းလုပ်ငန်း၊ အဝေးပြေးခရီးသည် လုပ်ငန်း၊ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ မြ၀တီခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ န၀ဒေးဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လီမိတက်၊ Central Hotel, Ngwe Saung Beach Hotel, Mogok Motel, န၀ဒေး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား အေဂျင်စီ၊ ဟော်တယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက်၊ Singapore – Fraser & Neave ကုမ္ပဏီ၊ ဘီယာနှင့် အရက်ချက်လုပ်ငန်း(မြန်မာဘီယာ၊ အေဘီစီစတောက်ဘီယာ၊ တိုက်ဂါးဘီယာ)၊ Myanmar Posco Steel Co. Ltd.၊ တောင်ကိုရီးယား ပိုဟွန်နှင့်သံမဏိ ကုမ္ပဏီ၊ Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.(သွပ်ပြားလုပ်ငန်း)၊ Myanmar Nouveau Co Ltd (ကျောက်မျက်အချောထည်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေး)၊ Myanmar Cement Co., Indonesia – P.T. Semen Cibninong & P.T. Prima Comexindo
ဟံသာဝတီ ဂေါက်ကွင်းနှင့် မြို့တော်ကလပ်၊ ပဲခူးဒေသ ဟော်တယ်နှင့် ဂေါက်ကွင်းလုပ်ငန်း၊ Mercury Manufacturing Co. Ltd. (ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း)၊
Myanmar Samgong Industrial Co. Ltd., South Korea - Samgong Industrial Co. (ရာဘာလှေထုတ်လုပ်ရေး)၊ Korean Gas Company with Daewoo (ဓာတ်ငွေ့)၊
Mamee Double Decker Ltd. (မလေးရှား-မာမီးကုမ္ပဏီ)၊ အော်တိုခေါက်ဆွဲထုပ်လုပ်ငန်း၊ Myanmar Tokiwa Corporation (ခဲတန်နှင့်အလှကုန် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေး)၊ Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd. (လက်ဝတ်ရတနာလုပ်ငန်း)၊ Diamond Dragon Co. Ltd., Berger Paints Manufacturing Ltd., Singapore – Berger International
The First Automotive Co. Ltd., Isuzu, Mitsugi (မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း)၊ Suzuki (မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း)၊ Myanmar Forward Support Co. စင်္ကာပူ– SKS Marketing Pte. (ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ လွှဲပြောင်းရေး)၊ NTCY Fair Price Cooperative Ltd (ကုန်တိုက်ကြီးများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရေး)၊
မြန်မာရာဘာဝုဒ် ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ သစ်အချောထည်လုပ်ငန်း(မော်လမြိုင်)၊ တော်ဝင် ပလပ်စတစ် ရက်ထည်အိပ် စက်ရုံ၊၊ တော်ဝင်ပလပ်စတစ် လူသုံးကုန်စက်ရုံ၊ ပီနံအိတ်လုပ်ငန်း၊ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း (ကျောက်ဆည်)၊ ဂရင်းနိုက် ကျောက်ပြား စက်ရုံကျောက်ပြားလုပ်ငန်း(ကျောက်ဆည်)
ငွေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ၊ ကြက် ငါး ပုဇွန်မွေးမြူရေးနှင့် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ငှက်သိုက် ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရေထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်း၊
မြန်မာ နာနတ်ရည်လုပ်ငန်း(ပဲခူး)၊ ဆာလဖြူရစ် အက်စစ်စက်ရုံ(မုံရွာ)၊ သကြားစက်ရုံ (ဥက္ကံ)၊ (အင်းငါးခွ)၊ ပဒုမ္မာဆပ်ပြာစက်ရုံ(ပေါင်)၊ မြ၀တီ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်
၉။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (မစက)သည် စစ်တပ်မှ စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း နောက်တခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တပ်မတော်၏အလျှို့ဝှက်ဆုံး စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ၁၉၈၉ ခု မတ်လတွင် န၀တ အစိုးရသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ ဤဥပဒေအရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ၁၂ ခုကို နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် အစိုးရ၌သာ အခွင့်အရေးရှိသည်၊ သို့သော် တခြား လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တခြားအဖွဲ့အစည်းတခုခုနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
၁၉၉၇ ခု မတ်လတွင် နိုင်ငံတော်မှ ငွေကြေးမထည့်ဝင်ဘဲ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတခုခုက အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို လုပ် နိုင်သည်ဟု ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက် မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန် သည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရန်အလို့ငှာ တပ်မတော်၏လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် လျှော့ချရန်၊ တပ်မတော်စစ်မှုထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် တပ် မတော်အတွက် အခြားလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များအကောင်အထည်ဖော်ရန် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (မစက) ကို စစ်ထောက် ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင် ရုံးအောက်တွင်ထားရှိသည်။ (မစက) ၏ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ကျပ်ငွေ (၁၀) ဘီလျံရှိသည်။
သံမဏိစက်ရုံ (အောင်လံ) (မြောင်းဒကာ) (အင်းစိန်ရွာမ) (မြင်းခြံ)၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (မြိုင်ကလေး) (ကျောက ဆည်)၊ စကျင်ကျောက်ပြားစက်ရုံ (မန္တလေး)၊
ဂရင်းနိုက်ကျောက်ပြားစက်ရုံ (လွိုင်ကော်)၊ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ (ရန်ကုန်)၊ သကြားစက်ရုံ (ကန့်ဘလူ) (တောင်စဉ်အေး) (အောင်လံ) ၊ မက်သနောစက်ရုံ (ကန့်ဘလူ)၊ အမိုးပြားစက်ရုံ (အင်းတကော်)၊ ရန်ကုန်ဆေးဝါးစက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ ဒဂုံဘီယာချက်စက်ရုံ (ရွှေပြည်သာ)၊ SIGMA ဝါယာစက်ရုံ (လှိုင်သာယာ)၊ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ (မောတောင်)၊ ဂေါဒန်မိုင်း (သီပေါ) (ထုံးဘို)၊ သစ်အချောကိုင်စက်ရုံ (စစ်ကိုင်း)၊
အင်းဝဘဏ်၊ အင်းဝထရေးဒင်း၊ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမခံ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ရတနာချင်းတွင်းသတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ
Northern Star Minerals Production & Trading Co., Ltd.၊ (သင်္ဘောဖျက်စက်ရုံ (သီလဝါ))၊ ကုန်စည်ခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း (ရန်ကုန်)၊ Tyazhpromexport Co., Ltd., Daniele Corp, Italian-Thai Corp., Daewoo International Corp., Myanmar Hyosing Corp. (SK Network Corp.), Hyosung Singapore Pte. Ltd., Kawasaki Plant Systems Ltd., Sinaran Corp., Grade Nine Co., Ltd., Myanmar Tractors Ltd., YMCC Yunnan, K-Y Kyaw Kyaw Co., Ltd., Zuri Co., Ltd., Moon Ray Co., Ltd., VSV Asia Co., Ltd., Superium Enterprise Co., Ltd., JFE Co., Ltd., Marubeni Co., Ltd., Sojit Co., Ltd., Polyice Co., Ltd, GMT Co., Ltd., Golden Star Co., Ltd., PEG Co., Ltd., Diethelm Co., Ltd., MCM Chem Tech Co., IE Petroleum Products Co., Ltd., Flying Sun Moon Co., Tractors World Co. KSS, ဒဂုံဝင်းဝင်း၊ သံလွင်၊ မြန်မာကိုင်ဒို၊ ငွေဆင်သံမှို တံတားဘောင် သံဆူးကြိုး သံရိုင်း ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ စက်မှုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ထုတ် လုပ်ရေး၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်း၊ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်-ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်
၁၀။ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ထောက်ပံ့နှင့်ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး တို့ကလည်း တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ကကနက်၊ ကကပံ့၊ ကကပြည်၊ တပ်မတော် ချည်မျှင်စက်ရုံ (မိတ္ထီလာ)၊ တပ်မတော် အထည်ချုပ်စက်ရုံ (မင်္ဂလာဒုံ)၊ တပ်မတော် မိုးရေကာဖျင်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊ တပ်မတော် ရှူးဖိနပ်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊ တပ်မတော်ချည်မျှင်စက်ရုံ (သမိုင်း)၊တပ်မတော်ဘောလုံးစက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်သတ္ထုပစ္စည်းစက်ရုံ(အုတ်ကျင်း)၊ တပ်မတော် သားရေစက်ရုံ (မန္တလေး)၊ တပ်မတော် ဆေးဝါးစက်ရုံ (မှော်ဘီ) ၊ တပ်မတော် လ္ဘက်စက်ရုံ (နမ့်ဆန်) (သံတောင်) (ရန်ကုန်)၊ တပ်မတော်စည်သွပ်စက်ရုံ (မန္တလေး)(သံတွဲ)၊ တပ်မတော် ပုဇွန်ငါးပိနှင့်ငါးချဉ်စက်ရုံ (မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်ဘီစကွတ်နှင့်ခေါက်ဆွဲစက်ရုံ(မှော်ဘီ)၊ တပ်မတော်ရမ်စက်ရုံ (ရွှေပြည်သာ)၊ တပ်မတော်ဂျုံမှုန့်စက်ရုံ (သြဘာ)၊ ပျဉ်းမပင် နို့ထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံ မြဝတီပုံနှိပ်တိုက်၊ မြဝတီရုပ်သံ
၁၁။ အဆင့်အသီးသီးရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်လက်ပါဝင် လုပ်ကိုင်နေကြ သည်သာမက တိုးချဲ့၍ပင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ အောက်ခြေအဆင့်တပ်ဖွဲ့များ၌ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် အခြား အ်ိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း စသည့် သာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပြင်၊ အချို့တပ်ရင်းများသည် ရေခဲစက် သို့မဟုတ် ကုန်း လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည့် အငယ်စားလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ တပ်ပိုင်အဆောက်အဦး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသာမက ကုန်တင်ကားများကိုပင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ငှားရမ်းသည့်ကိစ္စ အများအပြား ရှိနေပါတယ်
ခုနောက်ဆုံး MEC က ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ ကျော်
ရင်းနှီးမြုတ်နှံခဲ့တဲ့ MYTEL ကိုပါ ထည့်ပေါင်းလိုက်ပါ
ဆိုတော့ကာ ဒါတွေကိုဘယ်လိုစွန့်နိုင်မလဲ တစ်ဖက်မှာအင်အားအကြီးမားဆုံးသောစစ်တပ် တစ်ဖက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားအကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေးအသိုက်အမြုံကြီး တိုင်ပြည်ရဲ့အင်အားအကြီးမားဆုံးသောစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးကိုခွပြီးချုပ်ကိုင်ထားဖို့ စစ်တန်းလျားကိုလွယ်လွယ်ပြန်နိုင်ပါ့မလား စစ်တပ်ကိုပြည်သူတင်တဲ့အစိုးရအောက်ထား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်အပ် သူတို့ကစစ်တန်းလျားပြန် ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား ဒီလိုအသာတကြည်စွန့်ွှတ်နိုင် လုပ်နိုင်ကြပါ့မလား မစွန့်လွှတ်နိုင်ရင်ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ တွေးတော်မူကြည့်ကြပါ
Hlwan Wai Lwin
"စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ၊ စစ်တန်းလျားဆီ ဘာကြောင့် မ...
အကြီးလေး နဲ့ အငယ်လေး အကြီးမနဲ့ အငယ်မ ရန်ဖြစ်ကြသော်
ကျနော်နဲ့ ဂစ်တာတီးတဲ့မိုးကျော်......(RC21979-80) M8